Hupenyu, kurota kwekumuka - Afrikhepri Fondation
Chipiri, Gunyana 21, 2021
Hupenyu, kurota kwekumuka
Rngatichengetedze chimiro chechimiro cheMunhu ...
Tiri kunetseka uye kunetseka zvekuti tinorasikirwa nemurazvo wekutarisa. Isu tinofamba ipapo, kunge zvakarongedzwa otomatiki, tichiita hupenyu hwedu hwezuva nezuva stereotype: Maatomati, akagadzirira-akagadzirwa mitsara, marongero, zvirinani zvikamu zvakakosha zvemazuva edu. Tine udyire uye godo zvekuti mutsa wedu guruva rakakandwa mumaziso evanovimbika, nekuti moyo yedu izere nehunyengeri.
Ngatitarisei kune anamorphic hunhu hwehupenyu...
Hupenyu hausi hwekufungidzira here isu vatiri venyengedzo?
Iyi fungidziro inotinyengera kusvikira zuva iro, rakapenyerwa nechiedza chechokwadi, tichauya kuzogamuchira izvo zvakakosha zvezvinhu.
Zvese zvinoshanduka kana kusangana. Zvese zvinhu zvinoshanduka kana kushandurwa. Zvese zvinhu zvakagadziriswa pasi pekusakara nekubvaruka kwenguva.
Inotyisa sedutu, inoparadza seytsunami, inoparadza sekudengenyeka kwenyika, nguva inoparadza mafesheni nedzimba. Iyo inodzikamisa kumeso uye inounza kuchembera, senescence uye decrepitude kuzvinhu. Turbulence uye kudzikama, mhirizhonga uye kurongeka, hondo nerunyararo, kufamba uye inertia.
Hupenyu inzira isingaperi yeku circadian uko iko kuitika kwezviitiko kuchichinjika nemabwe ejecha easinga gadzikike. Inotakura mukati mayo stigmata yekusagadzikana. Hupenyu apo patinogona kuravira ephemeral ruva rerufaro, asi mariri isu tichafanirwa kurwira zuva rega rekumira kwekupedzisira kurwisa chirwere chakapararira uye kana taneta, isu tichapfuura, muviri wedu unert, uchaona mweya-shiri yedu ichisimuka mhepo. 'ether, pamusoro penzvimbo yenguva-yenguva yekumbundira kusaguma. Mweya wedu unozowana zvekare noumenon.
nekuda kwedonhwe remvura mugungwa guru,
yezviyo zvejecha murenje guru
yemuti uri mudondo guru,
kutambura hakuchina zvazvinoreva.
Ini ndiri mutema - Nhema Jesu (Nhetembo)
Sei vaAfrica vachifanira kuverenga mabhuku kuvana vavo?
Cherechedza Pasi Pasi (2016)
Muedzo we white white uye black doll (Video)
Planet Yoga - Zvinyorwa (2015)
Zvakavanzika zvemapiramidhi eChinese - Rugwaro (2016)